Bà gasy sy folk : hiverina, hanolotra zava-baovao ny Zana-Rotsy | NewsMada
Bà gasy sy folk : hiverina, hanolotra zava-baovao ny Zana-Rotsy
Par Taratra sur 13/10/2017
Tsy vitsy ny mahalala izany Charles-Kely izany, any ivelany any. Anisan’ireo manandratra ny mozika malagasy ity mpanakanto ity. Tsara anefa ny mampahatsiahy fa niainga tao amin’ny Zana-Rotsy izy. Ito farany indray, efa fahenon’ny maro, saingy tsy hita firy, tato anatin’ny taona maromaro. Ankehitriny, hiverina izy ireo ary hiverina « amin-kery », ao anatin’ny fanomanana zava-baovao, izay tsy miala amin’ny maha Zana-Rotsy azy. Dinidinika.
Gazety Taratra (*) : Oviana ny niorenan’ny tarika Zana-Rotsy ?
Andriatiana Zo Lalaina, mpikambana (-) : Razanakoto Emmanuel, dadanay, no nanorina ny tarika Zana-Rotsy, tamin’ny taona 1967. Rehefa nodimandry izy, ny taona 1972, nodimbiasanay zanany, izay misy sivy mianadahy. Ny taona 1982 anefa vao tena fantatry ny olona ny tarika, tamin’ny alalan’ny fandaharana iray, tao amin’ny onjampeo nasionaly. I Nirina sy i Charles Kely, izay any andafy, no nivahiny tao, tamin’izay ary ilay hira hoe « Jiro mirentin’Iarivo » no tena nahalalana ny tarika, tamin’izany. Amin’izao fotoana izao kosa, efa anisan’ny mpikambana hatramin’ny zafikely. Izany hoe, mihatanora hatrany ny tarika Zana-Rotsy. Miisa enina izahay no tena mpikambana mavitrika.
* Inona ny tena mampiavaka ny tarika ?
– Ny filalaovana gitara no tena nahafantarana anay. Raha ny gadona kosa, mifototra amin’ny bà gasy sy ny « folk classique populaire » ny Zana-Rotsy, hatrany am-piandohana. Noho ireo tanora ao anatin’ny tarika, ankehitriny, misokatra kokoa ny mozika lalaovina, saingy tsy miala amin’ny bà gasy. Izany hoe, bà gasy sy « folk open ».
* Azonao faritana ve ny lalana efa nodiavin’ny Zana-Rotsy ?
– Nisongadina indrindra ny nahazoan’ny tarika ny laharana fahatelo tamin’ny fifaninanana « Découvertes RFI », tamin’ny 1990. Anisan’ny sehatra nanoka-baravarana ny Zana-Rotsy ny fandaharana « Mbarakaly », tamin’izany fotoana izany. Raha ny sanganasa kosa, miisa 40 eo ho eo ny an’i Dada. Taty aoriana kosa, samy mamorona izahay ka raha atontaly ireo, manodidina ny 150 eo ary 60 no tena masaka sy azo entina an-tsehatra avy hatrany. Hatreto, mbola rakikira iray, mitondra ny lohateny hoe « Malalako tomany », no tafavoaka. Mbola olana goavana ny mpanao piraty ka aleo tsy mirotoroto amin’ny famokarana « album ».
* Raha izay ny taloha, aiza ho aiza kosa ny tarika ankehitriny ?
– Hifantoka amin’ny fanamafisana ny maha izy ny tarika Zana-Rotsy izahay. Misy anefa ny traikefa vaovao, entin’ireo tanora ao anatin’ny tarika. Hitondra rivo-baovao eo amin’ny mozika entin’ny Zana-Rotsy izany. Na izany aza, tsy miala amin’ny bà gasy ny fototra. Eo am-panomanana hira vaovao, miisa telo, izahay, ankehitriny. Heverina ny hivoahan’izany, amin’ny fiandohan’io taona 2018 io.